पर्खाल - | Kavyalaya - काव्यालय
by unesh चैत्र २२, २०७६
निमेषभरका लागि यो पर्खाल नाघेर मजस्ता छुद्र मान्छेले त्यो शुद्ध समाजमा पाउ राख्ने हो भने कस्तो परिस्थितिले जन्म लिन्छ होला ? म छुद्र यस मानेमा रहिछु कि मेरो अस्तित्व पर्खाल भन्दा यता रहेेछ र उसको उता । त्यसैले ऊ शुद्ध रहेेछ, उसको समाज जस्तै । विस्मय त के भने हामी अलग पनि पो रहेछौँ ! मैले उसको समाजमा कम्पन ल्याउने ल्याकत राख्दिरहिछु । मेरो अस्तित्व उसलाई स्विकार्य नभएता पनि उसको निद्रा खलबलाउने शक्ति ममा रहेछ । ऊ मलाई घृणा गर्दोरहेछ यद्यपि मसँग डराउँदो पनि रहेछ ।
कति फरक पेस आउँछ ऊ, पर्खाल यता हुँदा । मनौँ यही संसार हो उसको, यही स्वर्ग हो उसको, यही छ त्यो आकाश जहाँ ऊ अनन्तकाल सम्म उड्न चाहन्छ । म सोच्छु, पर्खाल उता कस्तो व्यक्तित्व झल्काउँछ होला उसले ? के उसले उसैगरी अठ्याउन सक्छ मलाई, उता हुँदा ? के उसैगरी खप्टिन सक्छ आफ्ना ओठ मेरा ओठहरुमा ? “एक चोटि आँखामा हेर न”, के उसैगरी भन्न सक्छ ऊ ? सक्दैन । हो, ऊ सक्दैन । यो जवाफ मेरो मन को उपज हैन, उसैले दिएको उत्तर हो यो । उल्टो उसले ‘सक्छ’ भन्ने भ्रममा म घन्चक्कर खाँदै डुलिरहेकी थिएँ । हुन त मैले नै जन्माएको घन्चक्कर न थियो त्यो । त्यो ढोका बजाएर जब ऊ यहाँबाट निस्किएर पर्खाल उता गयो तब मेरा मनमा अचानक सैयौं प्रश्नहरु ताँती लागे । तिनले ठुंगे मलाई । ढ्याम्म, ढोका बन्द जसै भयो तसै उत्तरहरु पनि फेला परे । टाउको घुम्न बन्द भयो, मानौँ म घनचक्करबाट निस्किएँ, यस्तो अनुभव भयो ।
umrao jaan by Banane Cuite
हाम्रो सम्बन्ध यो कोठा, यो कोठी भन्दा बाहिर छ कि छैन ? पर्खाल उता छ कि छैन ? पर्खाल उता उसको संसार कस्तो छ ? मलाई थाहै छैन । उसका बारेमा म बिरलै केही जान्दछु । आफ्नो बारेमा उसले बताएका कुरा म औंलामा गनेर भन्न सक्छु । उसको घरमा पाँच जना छन्, पाँच जनामा एक ऊ हो, एक उसकी आमा र एक उसको बुबा अर्का दुई को हुन् मलाई थाहा छैन । उसले भनेको पनि त छैन । उसका बुबा र आमा छन्, यो पनि मेरै कल्पना हो । बाँकी दुईमा उसका हजुरबुबा हजुरआमा हुन सक्छन् । उसका दाजुभाइ दिदिबहिनी हुनसक्छन्, काका काकी हुनसक्छन् धेरै भन्दा धेरै उसकि स्वास्नी र बच्चा हुन सक्लान् । ऊ विद्यार्थी हो । के पढिरहेको छ, उसैले जानोस् । भनेको छैन मलाई उसले । तीन, ऊ मलाई प्रेम गर्छ । यो मैले अड्कलेको होइन उसैले मलाई बताएको थियो केही साँझअघि ।
मेरो ओछ्यानमा पल्टिएर ऊ आँखा चिम्लिरहेको थियो । ऊ निदाइरहेको भने थिएन । उसको छातिलाई सिरानी बनाएकी मैले उसैलाई हेरिरहेकी थिएँ । आँखा चिम्लँदा पनि शान्ति झल्किएको थिएन उसको मुखमण्डलमा । धेरै भएको थिएन मैले उसलाई यसरी चोर नजरले हेर्न थालेको । लगातार कुनै वस्तुको सामिप्यता हुँदा त्यो वस्तु त आदत बन्छ भने ऊ त मान्छे, जसको सामु म हप्तै पिच्छे नाङ्गिन्थेे, करिब एक बर्ष यता । यस्तोमा कसरी नबनोस् त ऊ मेरो आदत ? ऊ आदत पक्का थियो मेरो, तर प्रेम ? कहाँ छ र मलाई उसलाई प्रेम गर्ने अधिकार ?
उसका छातिका रौं खेलाइदिनु पर्थ्यो मैले, उसलाई मनपर्दो रहेछ । छातिमा भर्खर भर्खर पलाइला रौं चलाइदिँदै थिएँ, उसले अचानक आँखा खोल्यो र समात्यो मेरो चोरी । केही क्षण हेर्यो मुस्कुरायो अनि मुख खोल्यो ।
“तिमीलाई निक्कै अगाडिदेखि एउटा कुरा भन्न मन थियो ।”
“म तिमीलाई प्रेम गर्छु ।”
Woman Laughing; BirkeloArt Home
मलाई हाँसिदिउँ झैं भयो । हाँसिदिएँ पनि । उसलाई थाहा थिएन ऊ कति औं मा पर्छ यसरी मलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नेहरुको लाममा । सबै त्यसै भन्छन् । कोही होसमा भन्छन् कोहि मातेका बेला भन्छन् । कसैको प्रस्ताव यो कोठा भन्दा उता गएको थिएन । ऊ अरु भन्दा फरक थिएन कमसे कम यस मामिलामा । सायद ऊ गर्ला पनि मलाई प्रेम, तर म त्यो प्रेमको के गरौँ जसको कुनै दिशा नै छैन । भनिदिएँ उसलाई, “प्रेम त म पनि तिमीलाई गर्छु, तिमी जस्ता हरकोहीलाई गर्छु । प्रेम गरेकै पैसा त लिन्छु म । म सबैलाई प्रेम गर्छु । भोलि यहाँ तिम्रा दाजु आए भने वा बुबा आए भने म तिनिहरुलाई पनि प्रेम गरिदिन्छु । र विश्वास गर उनीहरुले पनि ‘म तिमीलाई प्रेम गर्छु’ भन्न जिब्रो रोक्दैनन् ।”
केही बोलेन ऊ । भिता हेरिरह्यो । भुइँ हेरिरह्यो । एकैछिनमा उसले धेरै कुराहरु हेर्यो । मलाई पनि हेर्यो । भिता, भुइँजस्तो हेरिरहेन बस् हेरिदिनका लागि हेर्यो । अन्त नजर लान बाँकी नभएकाले हेर्यो । झुक्किएर हेर्यो । मेरो सर्वाङ्ग नाङ्गो शरीर हेर्यो, घुर्यो र केही नबोली पैसा छेवैमा राखिदियो र बिलायो । मेरो वचन त्यति कटु थिएन । तर सत्यले ओतप्रोत त्यो वाणीले नराम्रै पेच परेको थियो उसलाई । बेलुकीपख उसको फोन आयो ।
“मैले गरिदिनका लागि वा भनिदिनका लागि तिमीसँग प्रेम गरेको होइन । साँच्चै प्रेम गर्छु म तिमीलाई । अरुहरुको जस्तो होइन मेरो प्रेम ।”
बस्, यत्ति भनिदियो र राखिदियो । केही बोलिनँ म । ऊ साँच्चै अन्धिएको थियो, प्रेममा ? ।कोही यसरी, यत्तिकै विना कारण नै किन प्रेम गर्छ कसैलाई ? ऊ प्रेममा परोस्, मैले यस्तो कुनै हर्कत गरेको पनि त थिइनँ । के हो आखिरमा प्रेम ? के पाउनु प्रेम हो ? यदि पाउनु प्रेम हो भने के पाउनु चाहिँ प्रेम हो ? यदि गुमाउनु प्रेम हो भने के चाहिँ गुमाउनु प्रेम हो ? के आफुले प्रेम गरेको मान्छे पाउनु, गुमाउनु त्यहि हो प्रेम ? यदि पाउनु प्रेम हो भने मैले त ऊ बाट पैसा, समय र प्रेम प्रस्ताव बाहेक केही पाएको छैन । यदि दिन प्रेम हो भने उसलाई मैले मेरो शरीर र समय बाहेक केही दिएकै छैन । यस्तो लाग्छ यहाँ सबै सम्झौता गरिरहेका छन् । जो जति यहाँ आए, ढोंग टल्किन्थ्यो तिनीहरुको निधारमा, वासना झल्किन्थ्यो तिनीहरुको आँखामा । उनीहरु वासना बोल्दथे । तर…..वासना पनि त प्रेम कै रुप हो । आकर्षण, वासना यो प्रेमकै रुप न हो ।
म एकक्षणका लागि उसको प्रेम स्विकारिदिन्छु । अनि ? अनि के हुन्छ ? के उसले लैजान सक्छ मलाई पर्खाल उता ? यहाँँ, जहाँ म स्वयं घुटघुटिएको छु, जहाँ म स्वयम दिनहुँ मरेर ब्यूँझिन्छु, यहाँकी मलाई उडाएर उताकी बनाउन, के ऊ सक्छ ? म आफूभन्दा टाठाबाठा वेश्याहरुको कुरा सम्झन्छु । उनीहरुले भनेका थिए, “हेर् केटी, प्रेम त धेरैले गर्छु भन्छन् । ती सबै डरछेरुवा हुन् बुझीस् । सबै । कसैले हामीलाई प्रेम गर्दैन । सित्तैमा भोग्ने उपाय हो यो ।”
म कसरी नकारिदिउँ उसलाई, उसको बोलीलाई । साँच्चै भन्नु पर्दा मलाई उसको लतझैं केही लागेको थियो । ऊ मेरो आदत भएको थियो । ऊ अरुहरु जस्तै पर्खाल नाघेर आएको थियो मेरो बाहुपासमा बेरिन । होइन, उसले मलाई नै खोज्दै आएको भने कदापि होइन । उसलाई मजस्ता जो कोही भएपनि चल्थ्यो । सायद नक्षत्रहरुको खेल थियो, त्यो रात ऊ मैसँग सुत्न आइपुग्यो । अनि म ? मेरो के छ र ? म त योनी बेच्ने व्यपारी, यौन बेच्ने व्यपारी। स्वीकारिदिएँ उसलाई पनि, अरुले जस्तै । ऊ मेरा लागि अरु जस्तै थियो । म उसका लागि को थिएँ उसले सुरुसुरमा केहि बताएन । उसको उमेरको अन्दाज लगाउँदा, २३-२४ को देखिन्थ्यो ऊ । ऊ कति लाजालु पेस आएको थियो सुरुको दिन । म उसको अगाडि उभिदिँदा, मलाई अझै याद छ, उसका गाला राता भएका थिए । सहि हो कि पेशामा नयाँनयाँ थिएँ तर यति त थाहा पाउने भएसकेको थिएँ कि कसको पहिलो पटक हो, को सिकारु हो र को पारखी । उसको त्यो पहिलो चोटि थियो । आफ्नो कौमार्य गुमाउन, सहवास गर्न ऊ एक वेश्यासँग बास माग्न आएको थियो ।
दोश्रो पटक ऊ उसैगरी ढोका खोलेर मेरो अगाडि आइपुग्यो । करिब दुई महिना पछि, सायद । मैले उसको अनुहार बिर्सिसकेँ जस्तो लाग्थ्यो । तर उसको सम्झना मेरो अर्धचेत मनमा कतै लुकेर बसेको रहेछ, उसलाई चिन्न मलाई गाह्रो परेन । जब ग्राहकहरु केही गर्दैनन् वा लजाउँछन् मैले उनिहरुलाई फकाउनु पर्ने हुन्छ, यही सिकाइएको थियो मलाई । उनीहरु किन यहाँ आएका हुन्, यो बताउनु पर्ने हुन्छ । ऊ कुनै नयाँ मान्छे भइदिएको भए म त्यसै गर्थेँ । उसका हात समाएर बिछ्यौनामा बसाउथेँ होला उसलाई । खोल्थेँ होला उसका लुगा, खोल्थेँ होला मेरा लुगा । ऊ नयाँ मान्छे थिएन । नाङ्गिएर, नङ्गाएर सबै गरेर, अब मेरा सामु लजाउनुको के नै पो अर्थ थियो र ?
तेस्रो पटक भने ऊ लजाएन बरु धेरै मात्रामा खुल्यो । उसले आफ्नो नाम बतायो । विद्यार्थी रहेछ ऊ । उसले मेरा बारेमा पनि निकै कुराहरु सोध्यो । जस्तै मेरो नाम, मेरो उमेर, मेरो घर, मेरो बुबा आमा, मैले सबै ढाँटे उसलाई । नढाटुँ पनि किन ? ऊ को हो ? कस्तो मान्छे हो । उसका बारेमा सम्पूर्ण कुरा नजानी किन भनुँ म उसलाई आफ्ना बारेमा केही पनि ? त्यहि पनि म किन भनुँ आफ्ना बारेमा उसलाई ?
उसलाई पुराना हिन्दी गित मनपर्दा रहेछन्, केही बेर तिनलाई बजायो ।
यूँ हि पहलू में बैठे रहो
हाए, मर जाएगें हम तो लुट जाएगें
ऐसी बातें किया ना करो….
फरिदाको आवाजमा पुरै कोठा रोमाञ्चित भइरहेको बेला उसले “नाच्ने ?” भन्दै आफ्नो हात मतिर बढाँयो । सोचे, यसै गरी सुरु गर्न चाहन्छ ऊ, रोमान्टिक भएर । तर होइन रहेछ, ऊ झुल्यो एकैछिन । नाच्यो, मलाई नचायो । उसका हातहरुले मेरो कम्मर बेरे । कस्तो कोमल छुवाई ! यस्तो पनि छुवाई हुँदो रहेछ । म अनविज्ञ थिएँ । मैले कहिल्यै नगरेको कुरा गरिदिएँ । उसको अनुहारमा लुकेर हेरेँ । खैरा आँखा, थोरै दाह्री, केही उठेको नाक, माथिको अनुपातमा केही ठुलो मुनिको ओठ, भरिला हात, चौडा कुम…साँच्चै राम्रो रहेछ मोरो ! कसैले गुदगुदाए जस्तो, कसैले हल्लाइदिए जस्तो, कसैले खसालिदिए जस्तो…कस्तो कस्तो ।
“तिम्रो नम्बर..दिन मिल्छ ।” दिन त मिल्दैन थियो । कसैलाई दिएकी थिइनँ । उसलाई दिएँ ।
“फोन गर्दा रिसाउन त रिसाउँदिनौ नि ?” नाइँको भावमा टाउको हल्लाइदिएँ । मेरा गर्धन हल्लाइले लाज पनि सँगै हल्लिएको थियो । मन पनि सँगै हल्लिएको थियो । त्यो दिन यत्तिकै गयो ऊ, पैसा छेउको टेबुलमा राखेर । लिन त मन थिएन तर ‘लिन्न’ कसरी भनुँ ? किन भनी उसले प्रश्न गरिदियो भने, के जवाफ दिनु ?
उसले मलाई दिनमा कमसेकम एक पटक मात्र भए पनि फोन गरेकै हुन्थ्यो । सरकार बदल्ने, आफु बद्लिने त्यस्ता केहि गम्भिर बिषयमा बातचित हुँदैन थियो हाम्रो । ऊ बस् मेरो हालखबर सोध्थ्यो, खाना खाएको नखाएको सोध्थ्यो…बस् यत्ति । केही दिन पछि मैले पनि उसलाई यस्ता तमाम प्रश्नहरु गर्न थालेकी थिएँ । नजानिँदो तवरले मैले उसको फोनको प्रतिक्षा गर्न थालिसकेकी थिएँ । उसले फोन गर्दा अचानक केही भारी भए जस्तो हुन्थ्यो । त्यो दिन उसको अनुहार हेर्दा लागेको काउकुती फेरि लाग्थ्यो । निकै समयदेखि कसैले नचलाएको मुटु उसले चलाइदिएको थियो । भनेँ नि, कुनै पनि वस्तुको दिनहुँ वास्ता गर्दा, त्यसैको त लत बस्छ भने ऊ त झन् मान्छे थियो । उसले एकदिन फोन नगरिदिँदा दिनै अधुरो भए जस्तो, काँडा बिझेजस्तो, कतै दुखे जस्तो….कस्तो कस्तो । मैले भने आँट गरेर उसलाई फोन गर्न सकिनँ । के सोच्दो हो उसले ? यही सोचले नम्बरहरु कैयन पटक दबिएर पनि डायल भएनन् । उसले भनेको पनि थियो, “तपाईंकोबाट मलाई कल गर्न मिल्दैन है….”
ऊ आइरह्यो, मेरो मन बिथोलिदिनलाई । निक्कै दिनदेखि ऊ आएको थिएन, अचानक उसलाई देख्दा धड्कनको गति कति थियो म शब्दले बयान गर्न सक्दिनँ । उसले मलाई लजाउन सिकायो । हो, उसलाई देख्दा म लजाएकी थिएँ । फेरि फरिदा गुञ्जायो उसले कोठाभरी । कतिले चुमे मेरा ओठहरु, मैले कहिल्यै फर्काएकी थिइनँ । उसले खप्टाउँदा उसका ओठ मैले पनि खप्टाइदिएँ, चलाइदिएँ उसको जिब्रो, त्यो दिन । त्यही दिनबाट सबै कुराहरु बदलिए मेरा लागि ।
“मैले गरिदिनका लागि वा भनिदिनका लागि तिमीसँग प्रेम गरेको होइन । साँच्चै प्रेम गर्छु म तिमीलाई । अरुको जस्तो होइन मेरो प्रेम ।”
उसले अन्तिम पटक मलाई फोन गर्दा यही भनेको थियो । अहिले पनि ताजा छन्, आला छन् उसका यी शब्दहरु । यसपछि उसले मलाई फोन गरेन । मानौँ घुर्काइरहेको छ ऊ मलाई र घुर्किन दिइरहेकी छु म उसलाई । फोनको घण्टी बजिरहँदा, लाग्छ उसैले गरेको हो । कसैले ढकढक गरिरहँदा लाग्छ उहि हो ढोका उता । आएको छ ऊ मलाई लिन, निकाल्न यो खाडलबाट । तर ऊ हुँदैन ढोका पछाडि , फोनकलको आवाज पछाडि । ऊ कतै हुँदैन ।
केहिबेर समय निकालेर नियाल्छु आफैँलाई । कति थकित छु म । कति खोक्रो छ मेरो मन ? प्रेम पाउने लालसा कति बाक्लिएको छ यसमा । मगजमा कति धेरै व्याप्त छ ऊ । किन प्रेम गर्छ ऊ मलाई ? यदि यति नै प्रेम गर्छ त किन भनेन, ‘तिमी नगर यो पेशा । म तिमीलाई यस दलदलबाट उम्काएर लैजान्छु । छोडिदेउ ।’ के मैले उसलाई यति पनि अधिकार दिएकी छैन ? के यति पनि हक छैन उसको ममाथि ? कसरी सक्छ ऊ मलाई, जसलाई ऊ प्रेम गर्छ, उसलाई अरुकै बाहुपासमा बेरिएको हेर्न । मैले उसलाई ‘म तिमीलाई प्रेम गर्छु’ भनेको छैन, सायद यहि भएर पो हो कि ? तर के प्रेम शब्दमै मात्र सिमित छ त ? नबोलेरै पनि बुझ्ने कुरा हैन र प्रेम ?
अनन्त आकाशमा एक्लो घाम रमाएर रापिलो प्रकाश छरिरहेको छ । त्यही प्रकाश मेरा आँखामा परेकाले हेर्नलाई कष्ट भइरहेको छ । नछेकिने सुर्यको छेकी नसक्ने प्रकाशलाई म छेकिदिन्छु, हातले । केही दुर नजर दौडाउँछु, दुबोमा लम्पसार पल्टेको एक अधबैंसे युवकले आफ्ना दुबै खुट्टा खुम्चाएको छ र उसका खुट्टामा बसेकी छे एउटी छ-सात बर्षे बालिका । ऊ ढिकिच्याउँ खेलाउँदै छ त्यस बालिकालाई । उसको टाउको एक उस्तै अधबैंसे युवतीको काखलाई सिराने बनाएर बिसाइएको छ । उनीहरुबाट हटाएर अन्त नजर लान मलाई मन लाग्दैन । सुतेको त्यो पुरुष र त्यो युवती दम्पती होलान् भने त्यो बालिका उनीहरुको सन्तान हुनुपर्छ ।
अचानक म अनौठो दर्द महसुस गर्छु आफ्नो हृदयमा । बोझिलो तर तीखो काँडा बिझेको छ मेरो मुटुमा । के मैले चाहेको पनि एक परिवार र खुशी जीवन हैन र ? यति सपना देख्ने त छुट छ नि मलाई ! पूरा हुनु नहुनु अलग कुरा । पूरा……पूरा पनि किन हुन सक्दैन ? उसले प्रेम गर्छु भनेको छ । म पनि त प्रेम गर्छु उसलाई । उसैसँग किन बस्न सक्दैन मेरो घर ? आखिर एक घर बस्नलाई माया भए पुग्दैन र ? होला पैसा चाहिन्छ तर हामी कालान्तरमा पैसा कमाइहल्छौ नि ।
ऊ अझै सम्म आएको छैन । भेट्न मैले नै बोलाएकी थिएँ । उसको प्रेम को निचोड गर्ने सोचमा जो थिएँ ( माफ गर्नुस्, हाम्रो प्रेमको ) । अब उसको पर्खाइमा तड्पन मिसियो । छटपटाउन थालेँ म । आधा घण्टा भइसक्यो म आएको । ऊ किन आइपुग्दैन ? कि नआउने बिचार बनायो उसले ! नआउने भए त ‘आउदिनँ’ भन्थ्यो नि ।
उसका र मेरा फोटो हेरिरहेकी छु । घामको रापले होला गाला राता भएका छन् । लजाएको भने म होइन । त्यतिकैमा पछाडिबाट कसैले धाप दिन्छ । ऊ हुनुपर्छ लागेको थियो, अरु कोही रहेछ । मैले नदेखेको अनुहार । मैले नचिनेको अनुहार ।
“हजुर ।” मैले फर्किएर भनेँ ।
ऊ केही बोलेन । उसका पछाडि अरु दुई तीन जना मानिसहरु छन । पार्कमा घुम्न आएका हुनुपर्छ । मैले ती मध्य कसैलाई चिनेको छैन । न त चिनेकी छु मलाई बोलाउने पुरुषलाई नै । नियालेर हेर्छु उसको अनुहार, अहँ ! याद आउँदैन । कोही नबोलेकोले होला, वातवरण निक्कै अजीव हुँदै जान्छ । प्रश्नचिह्न झुण्ड्याएर आँखामा म उसलाई हेरिरहेकी छु । ऊ भने निक्कै अप्ठ्यारो मानेर मलाई हेरिरहेको छ । उसले धाप त दियो तर ऊ बोल्न चाहँदैन ।
“केही हैन ।” ऊ यति भन्छ र आफ्नो बाटो लाग्छ । उसँग भएका अरु पनि बाटो लाग्छन् । अलिपर पुगेर सबैजना मति छोडेर हाँस्छन् । गलल…..
त्यतिकैमा उनीहरु मध्यको एकले पछाडि फर्केर मलाई हेर्छ र भन्छ, “म भरे आउँछु है…..।”
यहि न हो मेरो पहिचान, देह बेच्ने एक तल्लो दर्जाको आइमाई जसको अस्तित्व पर्खाल उता छँदै छैन । के यता र के उता ? म यता पनि वेश्या हुँ र उता पनि वेश्या हुँ । के गलत भन्यो र त्यो पुरुषले ? आउँछु नै त भनेको छ । उसलाई आउने अधिकार छ । ऊ आइदिएन भने कसरी भरिन्छ मेरो पेट ? कसैले मसँग त्यो लिन चाहन्छ जुन बेच्नलाई नै म बसेकी छु भने यसमा के को आपति ? आखिर, मैले पुरै होसमा अप्नाएको पेशा हो यो । अधिकार त मलाई छैन यो सबै कुराहरु सोच्ने । र म किन सोचिरहेको छु यो सबै ?
अघिको जस्तो उत्साहा अहिले मनमा छैन । उसको प्रतिक्षामा अघि कस्तो उत्साहित थियो मन तर अहिले मेरो मनले उसलाई देख्दा सुख मनाउ समेत गरेन । बरु उल्टै हतास र निराश भइदियो यो । म बारबार उसलाई अघिका ती पुरुषसँग दाँजिरहेकी छु । उनीहरु बिचको समानता र भिन्नता टटोल्ने मेरो प्रयास यसै अधुरो रहन्छ उसको आगमनले । परैबाट ऊ आइरहेको देख्छु । जिन्स र शर्टमा कम्ता सुहाएको छैन उसलाई ।
भेट्ने बित्तिकै अँगालोमा बेर्ने गर्थ्यो ऊ, आज हात मात्रै मिलायो । केही क्षण छेउमा बसेर उसले आजका दिनसम्म के के गर्यो, कहाँ कहाँ गयो, किन आएन, मलाई कति सम्झियो, कति तड्पियो मलाई भेट्न नपाएर…यी तमाम कुराहरु बतायो । उसको परीक्षा रहेछ त्यसैले आउन नपाएको रहेछ । यो कुरा ऊ फोनैमा पनि बताउन सक्थ्यो तर उसले किन बताउने निर्णय गरेन ? ऊ घरिघरि वरिपरि हेरिरहन्छ । अनि म उसलाई हेरिरहन्छु । मेरा हातहरु नसमाई एकैछिन बस्न नसक्ने ऊ आज मभन्दा केही दूरी बनाएर बसिरहेको छ । उसको यो व्यवहार निक्कै मुस्किलले पचाउँदै छु म ।
उसले सिनेमाको दुई टिकेट खरिद गरेको रहेछ । हामी सिनेमा हेर्न गयौँ । करिब करिब खाली हलमा हामी दुई बाहेक अरु नौ-दस जना मानिस छन् । धेरै पछाडिको सिटमा उसले आफुलाई बिसाउँछ । त्यहाँ ऊ छेउको सिटमा बसिदिन्छु म पनि । अँध्यारोमा उसका हातहरु मति बिगार्छन् । ती कहिले मेरो पायन्टको खल्ति छाम्न भ्याउँछन् त कहिले मेरो छातीको नाम लिन भ्याउँछन् । उसले तमाम हर्कत गरेर भ्याउँछ । म चुप, भुत बनेर बसिदिन्छु, केही नबोली । ऊ थुतुनो जुधाउन ल्याउँछ म मुख खोलिदिन्छु । ऊ हातहरु छातिमा दौडाउँछ म आँखा चिम्लिदिन्छु । मलाई भेट्न नपाउँदाको उसको तड्पन उसका कामुक हातहरुले दर्शाउँदै जान्छन् ।
फर्किँदै गर्दा म उसलाई प्रश्न गर्छु, “तिमी मलाई किन प्रेम गर्छौ ।”
केही अल्मलिन्छ ऊ । उसका आँखाहरुमा हेर्छु, भागिरहेको देख्छु । कोठीमा आइपुग्दासम्म उसले मलाइ कुनै जवाफ दिएको छैन । म उसलाई फेरि प्रश्न गर्छु, उहि प्रश्न । ऊ जवाफहिन मलाई हेरिरहन्छ । निक्कै सोच्छ र एउटा फिल्मी डायलग फ्याँक्छ, “प्रेम गर्नलाई पनि कुनै कारण चाहिन्छ र ?” यति भनेर चिसो अँगालोमा ऊ मलाई बेर्छ र बिदाको अनुमति माग्छ मानौँ मैले अनुमति दिइनँ भने ऊ जाँदै जाँदैन । म दिन्नँ उसलाई अनुमति, भनिदिन्छु, “हतार छ ?”
“अँ, काम छ ।”
यति भनेर ऊ आफ्ना गोजी तर्फ हात लैजान्छ र हजारका तीन नोट झिक्छ । तिनलाई मेरो तर्फ बढाउँदै भन्छ, “आज धेरै रमाइलो भयो, धन्यवाद ।” छाँगाबाट खस्छु म । एकैपलमा म फेरि उही हुन्छु जसलाई म छोड्ने कल्पना गर्थें, एक वेश्या । उसका हातका ती पैसालाई हेर्छु, घृणा लागेर आउँछ उसको उपस्थिती देखि नै । ऊ मलाई एक वेश्याभन्दा माथि उठाएर हेर्नै सक्दैनँ, त्यही पनि मलाई प्रेम गर्छु भन्छ । कुन अधिकारले ऊ त्यसो भन्छ ? वासनाको धुँवामा अल्मलिएको उसको भावनालाई म धिक्कार्छु । उसको मुटु चुड्न मन भएर आउँछ ।
“आज त हाम्रो ‘डेट’ थियो जस्तै लागेको थ्यो । म त अरु नै कोही बनेर आएकी थिएँ । खैर तिमीसँग कुरा गर्नु छ ।”
“के कुरा ?” पैसा आफ्नो खल्तीभित्र राख्छ ऊ ।
“तिमी मलाई प्रेम गर्छौ है ?”
ऊ निक्कै नियालेर मलाई हेर्छ र मेरो कम्मरमा समाउँदै मलाई खाटमा बसाउँछ ।
“मेरो आँखामा हेर न ।”
“मलाई परिवार चाहिएको छ । दिलाउन सक्छौ ?”
“सक्छु…” आफ्ना ओठहरुलाई मेरो घाँटीमा बिसाउँदै ऊ मुग्ध हुन्छ । अब भने उसलाई कुनै हतार छैन । कतै जानू छैन उसलाई ।
“तिमी मलाई आफ्नै नजरमा त उठाउन सक्दैनौ ।”
उसलाई मेरो बोलीको कुनै मतलब छैन । उ सुनिरहेकै छैन । म उसलाई आफैबाट अलग्याउँछु । डस्ना उठाएर ऊ त्यहाँ राखेको कण्डम निकाल्छ । उसका ती कोमल गालामा तातो ताउ बिसाउने मन भए ता पनि निक्कै शान्त स्वरमा म उसलाई भन्छु ।
“मलाई आमा बन्नु छ ।”
अचानकको मैले पस्किएको अनौठो इच्छा सुनेर ऊ केही अलमलिन्छ । ‘के’ को भावमा मलाई हेर्छ ऊ र जवाफ दिन्छ, “बनौला न पछि ।”
“अहिले कोसिस गर्ने । आज नलगाउ त्यो ।”
“मलाई कुनै रोग छैन बिस्वास गर ।”
“प्रेम गर्छौ हैन, यति गर्न सक्दैनौ ?”
“त्यो हामी बिचको पर्खाल हो, भत्काऊ त्यसलाई ।”
ऊ निक्कै छक्क परेर मलाई हेरिरहेको छ । के हुँदै छ उसलाई केही ज्ञान छैन । ऊ आफ्ना बिग्रिएका कपडाहरु मिलाउँदै भन्छ, “तिमी बहुलायौ ।”
मलाई किन हो हाँसो छुटेर आउँछ र म जोर जोरले हाँसिदिन्छु । ऊ फेरि उही कुरा दोहोर्‍याउँछ ।
“तिमी बहुलायौ ।”
यति भनेर ऊ ढोका तर्फ हानिन्छ । म उसलाई बोलाउँछु ।
अघि खल्तिमा कोचेको नोटहरु ऊ मिल्काइदिन्छ र जान्छ ढोका बजाएर । ढ्याम्म…